विवरण लेनिन विष्टलाई माइतीघरको च्यातिएको झण्डाको फोटो खिच्दा पुलिसले फोटो हटाउन निर्देशन दिदैं २० मिनेट नियन्त्रण लिएर छोड्यो! सरकार, यो झन्डा फेरौं पहिला! फोटो खिच्न नि नपाउने? @LeninBista1 @NepalPoliceHQ @Hello_Sarkar
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७५-५-२९
छानविन गरी के कस्तो हो बुझ्न हुन । र जानकारी यस गुनासो शाखा गर्न हुन ।
प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-५-२९
गुनासो प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो । सो गुनासो सम्बन्धमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीलाई च.नं ११९७ मिति २०७५/०८/२६ गतेको पत्र मार्फत पत्राचार गरीएको ।
प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-८-२६
3) नेपाल प्रहरी
गुनासो प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो । सो सम्वन्धमा माईतिघर मण्डलामा राखिएको झण्डा हाल नया रहेको पाईएको । प्रहरीलाई मानोवाचित व्यवहार गर्न आवश्यक निर्नेशन समेत दिईएको साथै सो झण्डा फेर्ने कार्य प्रहरीको कार्य क्षत्र भित्र नरहेको भन्ने व्यहोराको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीको च.नं. ५८१४ मिति २०७५/०९/०२ गतेको पत्र यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको हुँदा सोही व्यहोरा सादर जाहेर गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-९-४
प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-१२-१७
गुनासो माथिको अन्तिम निर्णय गुनासो प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो । सो सम्वन्धमा माईतिघर मण्डलामा राखिएको झण्डा हाल नया रहेको पाईएको । प्रहरीलाई मानोवाचित व्यवहार गर्न आवश्यक निर्नेशन समेत दिईएको साथै सो झण्डा फेर्ने कार्य प्रहरीको कार्य क्षत्र भित्र नरहेको भन्ने व्यहोराको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीको च.नं. ५८१४ मिति २०७५/०९/०२ गतेको पत्र यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको हुँदा सोही व्यहोरा सादर जाहेर गरिएको छ ।